Nsuku zonke, sifunani phambili ekusaseni ephakeme futhi aqhelelane kakhulu, ziqhubeka liqhubekela phambili, kabili ukuzethemba, nomsebenzi weqembu konke isiqinisekiso sokuphumelela. Thina ikhredithi umndeni, iqembu ochwepheshe abanothando abathanda imbangela optical brightener ejenti, onjiniyela ezinkulu yokuthengisa consultant babe eminyakeni engaphezu kuka-10 isipiliyoni embonini, ukuhlinzeka amakhasimende nge imikhiqizo emihle kanye namasevisi professional ezobuchwepheshe kanye sakhele eliphakeme zonke ikhasimende.
Jinan Credit Chemical Co., Ltd. yasungulwa ngo 2008 e Jinan, China ne lunikezelwe ucwaningo kanye ukukhiqizwa optical brightener amanxusa kanye ushintsho. Inkampani yethu wenze ebanzi, esikhathini esingamahora anga-nocwaningo ngokucophelela on isicelo optical brightener ejenti iminyaka engaphezu kweyishumi ziqhubeka. Yesikhathi eside nokubambisana namanyuvesi owaziwa yasekhaya nokusiza izinkulungwane amakhasimende ekhaya aphesheya wehluke emakethe oshintshashintsha global.
Inkampani yethu ine izikhungo zocwaningo kanye laboratories elalinikezelwe ekuthuthukiseni iinkambiso zemikhiqizo emitjha kanye nokwenza imikhiqizo ekhona. Ukuhlinzeka amakhasimende ne imikhiqizo umhlabeleli njengoba umthwalo wethu. Imikhiqizo yethu kabanzi Amasimu engaphezu kweyishumi ezifana zepulasitiki, fibre zamakhemikhali, masterbatch, upende inki, upende, iphepha, zendwangu ukunyathelisa futhi ukudaya. Iminyaka engaphezu kweyishumi, sesiye i emisha, ukukhiqizwa, yokuthengisa, ubuchwepheshe kanye nokuvikelwa ibhizinisi kwemvelo.
umbono Inkampani yethu sika ukuba abe "brand odumile brightener optical ejenti" "ochwepheshe emkhakheni brightener optical ejenti isicelo", ukuhlinzeka amakhasimende nge imikhiqizo emihle kanye namasevisi, ukudala value kumakhasimende. umoya Credit ezisekelwe futhi win win ibhizinisi esizimisele ukuyenza. Sinamathela ngefilosofi ezinkampani "inkonzo, embili, ukwethembeka, nokubonga", ukuthuthukisa kanye namakhasimende amasha namadala ekhaya aphesheya.
(FBA 184) , Optical Brightener Ob1 , Optical Brightener Ob1 Ukuze Plastic , Optical Brightener ob 1 Ukuze PVC ,